Wararka Suuqa Ciyaaraha Maanta: Haaland, Kane, Dembele, Trippier, Henderson, Hernandez, Denis Zakaria
HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa Ciyaaraha Maanta: Haaland, Kane, Dembele, Trippier, Henderson, Hernandez, Denis Zakaria
December 30, 2021 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Dortmund ayaa isha ku haysa inay heshiis la gasho si ay ugu qanciso weeraryahanka Norway Erling Braut Haaland inuu la sii joogo, iyadoo 21 jirkaan mustaqbalka kooxda la go’aamin doono dhamaadka Febraayo. (Bild)
Manchester City ayaa sugi doonta ilaa xagaaga si ay weeraryahan ugu soo darto safkeeda, iyadoo kooxdu ay sii xajisanayso xiisaha ay u qabto weeraryahanka Tottenham iyo England Harry Kane sidoo kale Haaland ayaa ka mid ah liiska bartilmaameedyada. (ESPN)
Rajadii Barcelona ee ahayd inay qandaraaska u kordhiso xiddiga garabka uga ciyaara France Ousmane Dembele ayaa dhabar jab ku ah wadahadalada oo burburay. 24-sano jirkaan qandaraaskiisa haatan wuxuu dhacayaa xagaaga. (90 Min)
Newcastle United ayaa rajeyneysa inay dhameystirto heshiiska ay ku keeneyso daafaca midig ee Atletico Madrid iyo England Kieran Trippier, oo 31 jir ah, usbuuca soo socda. (Telegraph)
Chelsea ayaa wax ka weydiisay helitaanka 24 jirka daafaca bidix ee France Theo Hernandez, kaasoo AC Milan aysan ku fikiri doonin inay ku iibiso wax ka yar 60 milyan euros (£50.5m). ( Football Italia)
Daafaca dhexe ee kooxda Wolfsburg Maxence Lacroix, 21 sano jir ah, iyo Hungarian Attila Szalai, 23 Sano ji ah, iyo xiddiga Sevilla ee France Jules Kounde, Oo 23 sano jir ah, ayaa ka mid ah daafacyada ay Chelsea bartilmaameedsan karto bisha Janaayo. (Express)
Paris St-Germain ayaa wali aaminsan in ay heshiis cusub ka saxiixan karto weeraryahanka France Kylian Mbappe. 23 jirkaan oo qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan Waxana uu xor u yajau inuu la xaajoodo kooxaha ka baxsan France laga bilaabo Janaayo. (Nation)
Tababaraha ku meel gaarka ah ee Manchester United Ralf Rangnick ayaa u sheegay goolhayaha England Dean Henderson inaan loo ogolaan doonin inuu ka tago kooxda bisha Janaayo, iyadoo Tottenham ay isha ku heyso xaalada 24 jirkaan. (Manchester Evening News)
United ayaa soo gashay tartanka loogu jiro saxiixa 25 jirka reer Brazil ee Leeds United Raphinha. (Manchester Evening News)
Goolhayaha Spurs Hugo Lloris, oo 35 jir ah, ayaa u furan inuu dib ugu laabto kooxdiisii ​​hore ee Nice marka uu qandaraaskiisa kooxda ka dhisan London uu dhaco xagaaga. (Football Mercato,)
Sevilla ayaa heysata Fursad ah oo ku aadan doonistq weeraryahanka France Anthony Martial ka dib markii Manchester United ay diiday heshiiska kooxda reer Spain ay amaah ugu qaadatay 26 jirkaan. (Mirror)
Liverpool iyo Newcastle ayaa xiiseynaya 20-jirka Olympiakos ee reer Guinea ee Aguibou Camara. (Cagta Mercato – Faransiis)
Borussia Monchengladbach ayaa xaqiijisay in 25-jirka khadka dhexe ee Switzerland Denis Zakaria, kaasoo lala xiriirinayo kooxaha Arsenal, Leicester City iyo Everton iyo kuwa kale uu ka tagi doono kooxda marka uu qandaraaskiisu dhaco xagaaga. (90 daqiiqo)
Napoli ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca Manchester United Alex Tuanzebe, 24-sano jirkaan amaahda xilli ciyaareedka ee Aston Villa ayaa laga yaabaa in la soo gaabiyo si uu ugu biiro kooxda reer Talyaani. (Sky Sport Italia)
Tababaraha ku meel gaadhka ah ee Manchester United Ralf Rangnick ayaa laga yaabaa inuu raadiyo 22 sanno jirka daafaca uga ciyaara Barcelona ee Ronald Araujo, kaasoo lagu heli karo 30 milyan ginni, si uu u xaliyo dhibaatada daafac ee kooxdiisa. (Mirror)
Juventus ayaa diyaar u ah inay 21 jirka garabka uga ciyaara Sweden Dejan Kulusevski ku iibiso 35-40m euros (£29m-34m) bisha Janaayo, iyadoo Arsenal, Tottenham iyo Bayern Munich ay yihiin kuwa ugu muhiimsan. (Football Italia)